Burburka Geesku waa badbaadada Soomaalida Geeska Afrika - Land Of Punt
Dunida aynu ku noolahay waxa ay u qaabaysantay hab aad u cajab badan. Waa mid ay loolan iyo iska hor-imaad ka dhaxeeyo cid kastoo daris ah, iyagoo ku loolama ama isku haya caqiido diimeed, ama mid dhuleed oo deegaan ku salaysan.
Hadaba Soomaalidu iyagoo wajahaya hab-nololeedkaa dabiiciga ah, ayey Loolan adag oo mudo dheer ah wuxuu kala dhaxeeyey Boqortooyooyinkii Axmaarada ee kala denbeeyey. Lagasoo bilaabo taariikhiyan inta xog laga hayo Wakhtigii Axmed Guray iyo Boqorkii Axmaarada ee Wasan Segad.
Isku geelitirankii Awoodeed ee Axmaarada iyo Soomaalidu wuxuu liicay oo meesha ka baxay, wakhtigii Gumaystayaashii Reer yurub Mandaqada yimaadeen iyagoo si xaaraan ah ugu kala hiiliyey Soomaalida iyo Itoobiyaanka.
Waxa ay qaybo ka mid ah Dhulkii Soomaalida ku wareejiyeen Dawladii Axmaarada. taasi waxa ay aad u dhaawacday Qabkii iyo Qiyamkii qofka Soomaaliga ah , waxa aanay ku noqotay dhabar-jab loo gaystay Dad ahaan iyo Dal ahaanba. Somaalida oo ah ,Dad aad u ad-adag agtooda jileeca, quudhsiga iyo hoosayntuba ka yihiin Xaaraan, waxa ay noqdeen dad guntiga u giijistay sidii ay Dhulkoodii iyo Dadkoodiiba uga soo dhacsan lahaayeen Axmaarada iyo Itoobiyaankii Reer Yurub ugu wareejiyeen sida Sharci darrada ah .
Helistii Xoriyada ay heleen laba qaybood oo ka mid ah Dhulkii Soomaalida, waxa ka dhashay israacii iyo isku-darkii Waqooyi iyo Koonfur .Halkaana waxa ku Abuurantay ama lagu unkay JAMHUURIYADII SOOMAALIDA. waxa hadafka Koowaad, Labaad iyo Saddexaad ba u ahaa Qarankii Soomaaliyeed Soo celinta Dhulka ay Axmaaradu haysato .Damacaa iyo doonistaas oo Sababay Dagaalkii 1964-kii iyo 19977-kii . Labadaas Dagaal oo mid walba Soomaalidu lahayd gacanta sare ee Dagaaladaas ,oo Dagaalkii dhacay 1977kii ay kuba Hantiyeen Dhulkoodii ay Axmaaradu meersadeen, Waxa Mar labaad dhabar-jabiyey, Gacmahana u qabta Itoobiyaanka ,Dawladihii Shisheeye iyo Quwadihii Caalamka .intaa wixii ka denbeeyey Dalkii Soomaaliyeed wuxuu galay jahwareer Siyaasadeed oo sababay in ay Saaxada Dunida iyo inta Mandaqadaba ka baxdo wixii la odhan jiray JAMHUURIYADA SOOMAALIDA, ee Caasimadeedu ahayd Magaalada Xamar.
Qorre: Shaam suldaan
burburka Ethiopia siyaasada geeska siyaasada geeska afrika